के हो गुर्जो ? कसरी खाने ? के-के छन् फाईदाहरु ? - Sarokar Khabar
२५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२
भारतीय योग गुरु बाबा रामदेवले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९)सँग नडराउन आग्रह गर्दै गुर्जोको रस पिउँदा फाइदा हुने बताएका छन् । उनले झारखण्ड राज्यको एक कार्यक्रममा गुर्जोको रस पिउँदा कोरोना भाइरले संक्रमण नगर्ने बताएका हुन् ।
रामदेवले गुर्जोका साथै अन्य ४ घरेलु जडीबुटीको मिक्स रस पिउँदा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने हुँदा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्ने सल्लाह दिएका हुन् ।
पूरै विश्व कोरोना भाइरसको महामारी झेली रहेको बेला तर रामदेवले घरेलु उपचार पद्धतिले कोरोना भाइरसको संक्रमण नहुने दाबी गरेका छन् । उनले झारखण्ड पुगेर कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा भने ‘नियमित योग र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको माध्यमले हामी कोरोना भाइरससँग लड्न सक्छौँ । योग र पाँच औषधियुक्त सामग्री प्रयोग गर्दा सधैँका लागि कोरोना भाग्छ ।’
रामदेवले भस्त्रीका, कपालभाती र अनुमोल विलोम, प्राणायम र हल्दी, मरिज, गुर्जो, अदुवा र तुलसीको रस बनाएर नियमित खाए कोरोना भाइरसको संक्रमणले नछुने बताए । उनले यसलाई बिहान बेलुका खान पनि भनेका छन् ।
कोरोना लागेका मानिसले पनि यी औषधिको रस खाएमा आराम मिल्ने उनको दाबी छ । उनले कसैलाई पनि आतंकित नहुन सल्लाह दिएका छन् । साथै रामदेवले अन्य दुर्व्यसनबाट पनि मुक्त रहन सबैलाई आह्वान गरे ।
नेपालमा अहिले कोरानाका बिमारी देखिन थालेका छन् । यसबाट बच्न गुर्जोका प्रयोग गर्नुपर्ने बाबा रामदेवलगायतका व्यक्तिहरुले बताउँदै आएका छन् ।
के हो गुर्जो
यो नेपाललगायतका देशमा पाइने जडीबुटी हो । वनस्पतिविज्ञ तथा आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूले यसमा रोगसँग लड्न प्रतिरोध क्षमता बढाउन धेरै मद्दत गर्ने बताएका छन् । रोगसँग लड्न प्रतिरोध क्षमता बढाउने भएकाले गुर्जोको सेवन गर्ने सल्लाह आयुर्वेदिक चिकित्सक दिँदै आएका छन् ।
यो गाउँघरमा गुर्जोको नामले चिनिन्छ । यो एक प्रकारको लहरा हो । नेपालमा यसलाई पहिला ज्वरो, रुघाखोकी, चिसो र बाथ रोगको उपचारमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विभिन्न खाले एलर्जी, छालाको रोग र पेटका रोगको उपचारका लागि पनि यसको प्रयोग हुँदै आएको छ । यसको प्रयोग मधुमेहको उपचारका लागि पनि प्रयोग गर्ने गरेको आयुर्वेदिक चिकित्सक बताउछन् ।
अहिले आयुर्वेदका चिकित्सक यसले प्रतिरोध क्षमता बढाउने बताइरहँदा नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग पनि बढेको छ । यो लहरेदार पतझर विरुवा हो । यसको लहरा मोटो र गुदीदार हुन्छ । यसका आँख्लाहरूबाट जरा निस्केका हुन्छन् । यसको बोक्रा कागज जस्तो पातलो हुन्छ । बोक्रामा सेता गन्थीका थोप्ला हुन्छन् ।
यसका फलहरू आँख्लाबाट लामो लहरेदार भागमा फल्दछन् । भाले भूलहरु झुप्पामा झुप्पा हुछन् । पोथी फुलहरु एक्ला एक्लै हुन्छन् । फलहरु गुदीदार हुन्छ । आकारमा अण्डाकार हुन्छ र केराउका दाना जत्रा हुन्छन् । फल पाकेपछि राता हुन्छन् ।
गुर्जोको वैज्ञानिक नाम टिनोस्पोरा कर्डिफोलिया हो । यसमा फूल पनि फल्दैन र पल पनि लाग्दैन । योलाई वैज्ञानिकहरूले श्रेणीविहीन रानुन्कुलालस गणमा राखेका छन् । मेनिस्परमासिया परिवार रटिनोस्पोरा वंशमा पर्ने गुर्जो कार्डिफोलिया प्रजातिको जडीबुटी हो ।
यी देशमा पाइन्छ भौगोलिक हिसाबले उष्ण तटीय क्षेत्रमा पाइन्छ । एशियाका नेपाल, भारत, चीन, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्याण्ड, मलेसियालगायतका मुलुकमा पाइन गरेको छ ।
हाम्रो देशमा मध्य पहाडी क्षेत्रदेखि तराइका घना जंगलमा पाइन्छ । यो कुनै बोट नभएर लहरा हो । जुन ठूला पात भएको लहरा रुखका हाँगामा बेरिएको हुन्छ । यसको लहरामा औषधिय गुण हुन्छन । जसमा टिनोस्पोरिन, टिनोस्पाराएड, कर्डिफोलाइडसलगायतका रासायनिक तत्व पाइन्छन् ।
यो जस्तोसुकै माटोमा पनि हुर्कन्छ । गर्मी ठाउँमा राम्ररी हुर्कन्छ । यसका लहरा फागुनरचैततिर काटेर रोप्न सकिन्छन् । पानी दिइरहँदा विस्तारै पलाउछन् ।
दुई वर्षपछि प्रयोग गर्न योग्य
यो लहरा दुई वर्षपछि मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ । लहरालाई ५–७ सेमी लामा हुनेगरी काट्नु पर्छ । साना साना टुक्रालाई फेरि चार फ्याक गरेर काटेर सुकाइन्छ । यसलाई मुग्रोले थिचेर पनि राखिन्छ । एक हप्ता जति घाममा राम्ररी सुकाएपछि प्रयोग गर्न मिल्छ । यसको भण्डारण गरेरपछि पनि प्रयोग गर्न मिल्छ । कृषि पोष्टबाट साभार
गैर सरकारी संस्थाद्धारा आर्थिक सहयोग
२९ भाद्र २०७७, सोमबार ०४:४७0
कमलामाईका युवाले १.८५ र २.८५ व्याजदरमा व्यवसायिक ऋण पाउने
सिन्धुली, २९ भदौ २०७७ कमलामाई नगरपालिकाका युवाहरुले अव सरल व्याजदरमा व्यवसायिक ऋण पाउने भएका छन् । महिलाहरुको लागि १ दशमलब ८५ प्रतिशत र पुरुषको लागि २ दशमलब ८५ प्रतिशतमा ऋण पाउने भएका हुन् । कमल
११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १२:२०0
सासंद पहाडीले जनादेशलाई भुले – न्याैपाने
फिक्कल, ११ फागुन २०७७ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सिन्धुलीका जिल्ला कमिटि सदस्य जयप्रसाद न्यौपानेले सांसद गणेशकुमार पहाडी जनादेश विपरित हिडेको आरोप लगाउनु भएको छ । मंगलबार फिक्कल गाउँपालिकाम
६ माघ २०७७, मंगलवार १४:०९0
बोलेरो दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु, ५ घाइते
सिन्धुली, ६ माघ २०७७ सिन्धुलीको डकाहा बाट चकमके तर्फ जाँदै गरेको स १ च १६७७ नं.को डबल क्याप बलेरो दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । अरु पाँच जना घाइते भएका छन् । बलेरो आफै अनियन्त्रित भई स
२३ बैशाख २०७८, बिहीबार १५:५३0
दुधौलीमा सङ्क्रमण फैलिएपछि प्रजिअ न्यौपानेद्धारा स्थलगत निरीक्षण
सिन्धुली, २३ बैशाख २०७८ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपाने सहित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले बिहीबार दुधौली नगरपालिकामा स्थलगत निरीक्षण गर्नु भएको छ । दुधौली नगरपालिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) क
२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १५:३७0
कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख नाघ्यो
काठमाडौँ २३ असोज / नेपालमा कोरोना भाइरसका दुई हजार ५९ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा साे संख्यामा सङ्क्रमित थपिएका हुन् । पछिल्लो चौबीस घण
गुट रहित पार्टी बनाई जिल्लामा कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउछु : पोख्रेल २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२
कविता : दिउ अरुलाइ नै दोष दिउ ! २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२
सेवा निवृत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू सम्मानित २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२
सिलवन्दी टेण्डर आह्वानको सूचना २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२
प्लानद्धारा कोभिड संकट ब्यवस्थापन केन्द्रलाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२
कोभिड–१९ अस्पतालाई स्वास्थ्य सामाग्री प्रदान २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२
गोलन्जोरमा कृषकलाई राँगा र बोका वितरण २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अनुरोध २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२
दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन रकम वितरण २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२
वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरु आन्दोलित २५ भाद्र २०७७, बिहीबार १४:१२